China eqinileyo iinkuni icala ibhodi yokugcina elula ucango olunye kunye iidrowa ezine # 0105 ukwenziwa kunye nefektri | Yamazonhome
Umgangatho oqinileyo wekhabhathi yokugcina ikhabethe enomnyango omnye kunye neerowuli ezine # 0105
Igama: Ibhodi esecaleni
Inombolo yomzekelo: Amac-0105
Ubukhulu: 900mm * 400mm * 800mm
Isakhelo se-Oak Centennial
Izinto eziphambili ze-FAS-grade emhlophe oki engeniswe eMntla Melika. Umthi unzima, unombala ocacileyo kunye nokuhomba okuhle. Emva kokulungiswa ngononophelo, iimpawu zomthi ngokwawo zigcinwa ubukhulu obukhulu, esisipho esinikwe ngendalo. Iipateni ezintle ezimilise intaba zilungiswe kakuhle, Iphaneli yangaphakathi yedrowa yenziwe ngomthi wepaulownia ngobulukhuni obuphezulu, obuqinileyo kwaye bomelele.
Omnye umnyango ikhabethe lokulala ezine zedrowa
Iidrowa ziyilelwe ngobungakanani obungalinganiyo, zizele bubugcisa obungaqhelekanga, kwaye zinokuhlangabezana neemfuno zendawo yokugcina. Ukuphakama kwekhabinethi kuye kwahlengahlengiswa emva kweemvavanyo ezininzi, kwaye kuya kuba luncedo kakhulu nokuba uhlala emaphethelweni ebhedi ukukhetha iimpahla. Kukunceda ukuba uququzelele utshintsho olwenzeka rhoqo Umsebenzi wosetyenziso, idrowa evaliweyo ingakunika indawo yabucala eyoneleyo.
Solid iinkuni isilayidi kaloliwe + inkqubo tenon ngokudibeneyo
Iidreyidi zemithi eziqinileyo zihlala ixesha elide kakhulu. Ukuqinisekisa ukhuseleko lokusetyenziswa, senze ngokukodwa imida yokuthintela ukutsala kwidrowa nganye, ke akukho sizathu sakuxhalaba malunga neengozi zokhuseleko zokutsala iidrowa. Imigca elula kwaye egudileyo, uyilo lobungakanani obulungileyo, Unokuxhasa isiseko sendawo yokuhlala.
Inxalenye enye yemilenze yekhabhathi yomthi eqinileyo
Imilenze eshinyeneyo yomthi eqinileyo kunye nokungoyiki kunye nokuyilwa okunganyangekiyo emazantsi kunokuwukhusela ngcono umgangatho kwaye kwandise ubomi benkonzo yekhabhinethi. Ezantsi ayichukumisi umhlaba ukunqanda ukufuma kwaye kufanelekile ukuba uyicoce kwaye uyinyamekele. Isakhiwo somlenze omnye, ukuzinza okuzinzileyo kunye nokubambelela ngokuqinileyo.
Umgangatho ophezulu wehango lomnyango wehardware + ucango lwekhabhathi yeglasi
Umnyango wekhabhathi weglasi ebonakalayo uyahambelana nokugcinwa kunye nokubonisa. Iibhotile ezimbalwa zewayini elungileyo kunye namaqhekeza ambalwa obugcisa abekwe ngaphakathi, intle kwaye inesisa. Umva ongasemva ufakelwe ukucoca umoya ngaphakathi, ubungqina bomswakama kunye nokuchasa. Umgangatho ophezulu weehenjisi zomnyango wehardware, Kulula ukuvula, akukho ngxolo, akukho lula ukurusa.
Indawo enkulu yokugcina idrowa
Isibambo somthi esomeleleyo sidityaniswe nomhlaba wokuzoba, ukutyibilika kunye nokutsala sisimumu, ukugcina indawo, kunye nokugcina ukubonakala kulula. Ukuxhotyiswa ngesixhobo sokukhusela isifuba kwiidrowa ukunqanda ukulahla ngengozi ikhabhathi, ukukhusela impilo yamalungu osapho, ukhuseleko lwabantwana kunye nabazali ngokukhululeka.
Egqithileyo Umnyango omnye weCandelo leDraw elineSofa elula yeKhabhinethi yokuGcina iKhabhinethi # 0104
Okulandelayo: Uqeqesho lweTaekwondo loMatrasi womoya ongenawo amandla wokuThutha iiNdlela 0381
I-Sup Surfboard ibhrashi yokuma kwiPaddle Board 0370
Zonke iiSolid zeMithi eziQinisekileyo zeNdawo yeDraw yegumbi lokulala ...
Household Desk Simple Computer Desk Umdibaniso ...